Nnwom 105 NA-TWI - Onyankopɔn ne ne nkurɔfo - Monna - Bible Gateway
Nnwom 104Nnwom 106
Nnwom 105 Nkwa Asem (NA-TWI)
105 Monna Awurade ase; monna ne kɛseyɛ adi. Ka nea wayɛ kyerɛ aman. 2 Monto ayeyi nnwom mma Awurade! Monka anwonwade a wayɛ no nkyerɛ. 3 Momma mo ani nnye sɛ yɛyɛ ne de. Momma wɔn a wɔsom no no nyinaa ho nsɛpɛw wɔn. 4 Monkɔ Awurade nkyɛn na ɔmmoa mo na monkɔ so nsom na daa.